आमा …..कसैले बाहिरबाट बोलायो । अँगेनामा भात पकाइरहेकी साँहिली मगरनीको कान आवाज आएतिर गयो । को हँ ? अगुल्टो ठोस्दै साँहिली मगरनीले भित्रबाटै बोलीन् । म आमा, हजुरकी नातिनी । नातिनी भन्ने वित्तिकै साँहिली मगरनीको कान ठाडा ठाडा भए । धुवाँइरहेको अगुल्टो ठोस्न छोडेर उनी एक सासमा अाँँगनमा पुगिन् । आँगनको डिलमा १३÷१४ वर्षकी किशोरी देखेपछि उनी छक्क परिन् आफ्नो कुनै नातिनी जस्तो लागेन उनलाई र भनिन्् मैले त नानीलाई चिन्न सकिन नी ? हँसिलो अनुहारमा उभिएकी ति किशोरीको मुहार एकाएक निलो भयो । मुटुमा बेस्सरी केही बिझे जस्तो भयो । उनले साहास जुटाएर म हजुरको जेठो छोरो अर्थात शहिद विजयको छोरी भन्न खोज्दै थिइन् । एकाएक गला अवरुद्ध भएर आयो । उनका आँखाबाट त्रिशुली बग्न थाल्यो । ति किशोरी केही बोलिनन् । उनी नबोलेपछि साँहिली मगरनी आफैँले भनिन् भन न नानी तिमि को हौ ? कहाँबाट आयौ ? म कसरी तिम्रो हजुरआमा भएँ ?यति धेरै प्रश्न गरिसकेपछि ति किशोरीले भनीन् म तपाईको साख्खै नातिनी हुँ आमा मामाघरबाट आएको । मामाघरबाट आएको भन्ने वित्तिकै साँहिली मगरनीले किशोरीलाई झट्टपट्ट आफूतिर तानेर अँगालो हालीन् र कपाल मुसार्दै भनिन् मेरो जेठो छोरो…….
उनका आँखाबाट हर्षका साउने भेल झर्न थाल्यो । उनी नतमस्तक भइन् । निकैबेर अँगालोमा बरेपछि उनले भनिन् तिमिले कसरी पत्ता लगायौ हाम्रो घर ? कसरी सम्झ्यौ हामीलाई ? तिमि अहिले सम्म कसरी बसेकि थियौ ? आमा सन्चै छिन् ? साँहिली मगरनीले यतिविधि प्रश्न एकसाथ गरीन् किशोरीमाझ । ति किशोरीले भनिन् आमा पहिला भित्र जाउँ अनि सबै कुरा भन्छु । अब म तपाइहरुलाई छोडेर कहिलै पनि मामाघर जान्न । अब म तपाईहरुसँगै बस्छु यही पढ्छु, ठूलो मान्छे हुन्छु ।
साँहिली मगरनीले किशोरीको हात समातेर भित्र लगिन् अनि अँगेनाको डिलमा पिर्कामा राखिन् र आफू पुनः अगुल्ठो ठोस्दै ढङ्ग्रोले फुफु गर्न थालिन् । हजुरआमा आगो फुक्न लागेको मौकामा ति किशोरी बाहिर निस्किन त्यही बेला किशोरी आफ्नो बाबुको घरगोठ, खेतबारी, डाँडा काँडा हेर्न थालीन् । उनलाई कुनै स्वर्गमा पुगेको जस्तो भान भइरहेको थियो । गोठमा गोरु, भैंसी, बाख्रा लहरै बाँधिएका थिए । उनलाई देखेर आफ्नै लागेर हो की क्या हो कराउन थाले । बारीको डिलमा टन्न केराउका बोटहरु थिए । अाँगनको छेउमा रक्सी बनाउने भाँडाहरु लस्करै थिए । उनी ति सबै कुरा नियाल्दै थिइन् । त्यहीबेला भित्रबाट साँहिली मगरनीले बोलाइन् छोरो भित्र आउ । आफ्नी हजुरआमाले बोलाएपछि उनी भित्र गइन । पहिला जहाँ बसेकी थिइन पुनः त्यही बसेर किशोरीले सोधीन् आमा हाम्रो घरमा को–को हुनुहुन्छ ? हजुरबा र दुइटा काका छन् साँँहिली मगरनीले उत्तर दिइन् । अनि खै उहाँहरु कता जानुभयो ? हजुरबा खेतमा जानु भएको छ काकाहरु क्याम्पस गएका छन् आउने बेला भो ।
हजुरआमा नातिनी कुरा गर्द थिए, साँहिला मगर एक मुठो घाँस च्यापेर आँगनमा आइपुगे । बाख्रालाई घाँस झुण्ड्याएर हातमुख धोइ उनी भित्र पसे । अँगेनाको डिलमा हेर्दा बाहुनी जस्ती नचिनेको केटी देखेपछि साँहिला मगरले अलि निधार खुम्च्याएर भने को हो ? हाम्रो चुलामा बस्ने ? यसरी सिधै चुलामा आउन किन दिएको जो पायो त्यहीलाई ? साँहिला मगर साँँँहिली मगरनीसँग झर्किए । बुढाको कुरा सुनेर साँहिली मगरनीलाई असाध्यै रिस उठ्यो । के भन्छन् यी बुढा आफ्ने नातिनीलाई पनि अर्काे ठान्यौ कि के होला ? आफ्नै नातिनी ? को नातिनी ? बुढाले यसो भन्न भ्याउँदा नभ्याउँदै बाहिरबाट उनीहरुका दुइ छोरा पढेर आएर । दैलोबाट भित्र नछिर्दै एउटाले भन्यो आमा भात पाक्यो ? पाक्यो पाक्यो छिटो लुगा फेरेर आओ । उत्तिनखेरै दुईभाइ लुगा फेरेर हातमुख धोएर भात खान आए । को हो नी यो फुच्ची ? जेठोले सोध्यो । को हुनु नी तेरो भतिजी साँहिली मगरनीले ठाडै जवाफ दिइन् । भोकले सबैजना आत्तिएका रहेछन् क्यारे पहिला भात खाने सुरसार गर्न लागे । ति किशोरीले पनि केही नबोली आफ्नी हजुरआमाले पकाएको भात पहिलो चोटी खाइ । उसलाई खुव आनन्द लागिरहेको थियो । भात खाइपछि पछि साँहिला मगरले भने ल भन् बुढी यीनी नानी को हुन् ? साँहिली मगरनी बोल्नुभन्दा पहिले उनै किशोरी बोलिन् म हजुरको नातिनी बा ! शहिद विजयको छोरी । विजयको छोरी …. ? बुढा दंग परेर बसेको ठाउँबाट उठेर किशोरीलाई बोकेर एक फन्का घुमाए अनि गहिरो चुम्मन गर्दै भने मेरो छोरो तिमि जिउँदै रहेछौ । किशोरी पनि दंग पर्दै हजुरबाको काँँखमा बसि र सुरु गरी आफ्नो जीवनको कथा– कुनै दिन साँहिला मगर र साँँहिली मगरनीको कोखबाट चारवटी छोरीपछि जन्मिएका थिए विजय । अत्यन्तै राम्रो भलाद्मी थियो उ । १० कक्षामा पढ्दाखेरी माओवादीमा लागेका विजयले निर्मला शर्मासँग बिहे गरे । अन्तरजातीय विवाह गरेका विजय र निर्मलाको प्रेम विवाहको चिनो हुन् ति किशोरी । किशोरी गर्भमा आएको २ महिना नबित्दै तत्कालीन शाही सेनाले विजयलाई गोली ठोकेर मारे । उनकी आमा निर्मलाले आफ्नो लोग्ने मरेपछि गर्भको बच्चा फ्याँक्न धेरै जोड गरिन् । पार्टी पङक्तिमा सबै तहका नेताहरुसँग गुहार मागिन् गर्भ तुहाउन । तर उनको कुरा मान्न कोही तयार भएनन् । एउटा होनाहार युवा शहिद भयो । उसको चिनो एउटा गर्भ छ निर्मलाको कोखमा । कुनै पनि हातमा त्यसलाई जोगाउर हुर्काउनु पर्छ भन्ने धारणा पार्टीका सबै मान्छेमा भएपछि अन्ततः निर्मला हारिन् र अन्ततः जन्माइन निमालाई । तिनै निमा हुन् ति किशोरी । जो आमाले बारम्बार गर्भपतन गराउन खोज्दा अरुको सद्भावले जन्मन पाएकी छोरी ।
शाही सेनाको पञ्जाबाट जोगाए जनताले निर्मला र निमालाइ । आफूले नखाएर भए पनि निभालाई खुवाए । आफूले नलाएर पनि निभालाई लगाउन दिए । अन्ततः संकटकाल सकिएर युद्धविराम भएपछि निमा आफ्नो माइतिघर फर्किन् ।
छोराको छोरी जन्मिएको खवरले खुसी भएका मगर परिवारले त्यो खुसी आफूले सँघाल्न पाएनन् । आफूले बुहारी र नातिनीलाई छोरा सम्झेर राख्ने सपना पूरा गर्न सकेनन् । निर्मला बाहुन परिवारकी छोरी विजय मगर परिवारको । सायद त्यही भएर हुनसक्छ निर्मलाले विजयको घरमा जान नचाहेको । संसार बदल्न हिंडेको मान्छे यस्तो संकुचित भएपछि कस्को के लाग्छ र । निर्मला माइत आएको थाहा पाएपछि विजयको बाबु आफ्नी बुहारी र नातिनीलाई लिन गए । तर निर्मलाले कुनै दिन पनि त्यो घरमा नफर्किने बताएपछि विजयको बुबा रुँदै घर गएका थिए । त्यसभन्दा पछि फेरि लिन गए । फेरि पनि निर्मलाले अब देखि आफ्नो अगाडी नआउन भनेपछि हो उनी कहिले पनि बुहारी र नातिनी भेट्न नगएका ।
निमा बिस्तारै हुर्किंदै गइ मामाघरका हजुरबा, हजुरआमा र मामा माइजुले उनलाई मायाँ नै गरेर राखेका थिए । तर निर्मलाले भने अर्काे विवाह गरिसकेकी थिइन् । आमाले विवाह गरेपनि निमाले मामाघर छोडेकी थिइनन् । उनको बाबु र घरपरिवारबारे निमाले थाहा नपाओस भन्ने चाहना मावली पक्षको थियो । त्यसैले त उनीहरुले कहिले पनि निमालाई आफ्नो बाबुको घर परिवार बारे जानकारी नै गराएनन् । एउटा लक्का जवान छोरो जो आर्मीको गोलीले म¥यो । उसको प्रेमको चिनो नातिनी समेत भेट्न नपाउदा साँहिला मगर र साँहिली मगरनीलाई कति पीडा थियो होला ? त्यो पार्टीका सबै मान्छेले नजिकबाट निहाली रहेका थिए । तर गर्न सक्ने अवस्था केही थिएन् । निमाको त्यो कलिलो मस्तिष्कमा यस्तो दुःखको कुरा भर्नु हुँदैन भन्ने सबैमा लागेर कसैले पनि केही भनेका थिएनन । सत्य कुरा बताउन धेरै ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने लागेर तत्कालीन् छापामार कर्णले एक दिन निमालाई बोलाएर गाउँका दुइचार जना मान्छे राखेर सबै कुरा बताए । त्यत्ति बेला निमा साह्रै रोही । उसले आफ्नो बाबुको याद मेटाउन आफू मामाघर होइन घर गएर बस्नुपर्ने अठोट गरी र तिनै कर्णलाई लिएर हजुरबा हजुरआमा भेट्न गइ । निमाले कथा जसरी आफ्नो जीवनको कहानी सुनाउँदा मगर परिवार डाँको छोडेर रोए । निमालाई छातिमा टाँसे साइँला मगरले । वर्षौँदेखि हराएको खुसी फर्केर आएकोमा सबैले खुसी साटासाट गरे ।